Microsoft waxay soo iibsatay shirkadda SwiftKey | Wararka IPhone
Imaatinka suuqa kumbuyuutarrada saddexaad ee leh iOS 8, wuxuu ahaa kacaan dhab ah iOS, oo gaadhay App Store tiro badan oo keyboor ah oo inbadan oo kamid ah la iloobay. Qaabka cusub ee wax loo qoro ee kumbuyuutarradani noo ogolaadaan wuxuu ku habboon yahay taleefannada yaryar, maaha taleefannada leh shaashadaha waaweyn sida iPhone 6 iyo 6 Plus iyo kuwa ku xiga. Hadda waxaan isticmaalaa iPhone 6 Plus iyo iPhone 5 maalin kasta.Kan dambe, waxaan hayaa kumbuyuutar dhowr ah taas ii oggolow inaan farta ka dul mariyo shaashadda si aan wax badan u qoro, laakiin shaashadda 6 Plus waa macquul.
Maalmo ka hor waxaan kugu wargelinay fikradda Microsoft ee ah ku bilow kumbuyuutar cusub labada iOS iyo Android qaab wareegsan, Waxay ku yaali laheyd mid ka mid ah geesaha hoose ee shaashadda taasna waxay noo oggolaan laheyd inaan ku qorno hal far, suulka, oo ku habboon qalabka leh shaashad ka weyn afar inji. Haddii aad tijaabada ku sameyso taleefankeena oo aad isku daydo inaad wax ku qorto suulkaaga iyadoo loo eegayo qaabka kumbuyuutarka ee Microsoft, sawirka kore, waxaad arki doontaa sida ay ugu muuqato markii hore inay tahay fikrad aad u fiican.
Sida ay umuuqato inay tilmaamayso, Microsoft waxay dooratay dariiqa ugu dhaqsaha badan markay soo saareyso wax soosaar cusub ama codsi suuqa waana wax aan ka aheyn iibsiga, maadaama ay horeyba dhowr jeer u sameysay Acompli, Sunrise Calendar iyo Wunderlist si aad uxusho dhowr. . Munaasabaddan, kuwa Redmond waxay iibsadeen shirkadda mas'uulka ka ah SwiftKey, lacag ku dhow 250 milyan oo doolar, haynta dhamaan tikniyoolajiyadda shirkadda.
SwiftKey, ka sokow in lagu yaqaanay teebabka ay ku bixiso labada macruufka iyo Android-ba, waxay soo saartay tikniyoolajiyad xilligan la joogo waxaad isticmaaleysaa Stephen Hawking. Way cadahay in iibsigan loogu talagalay in lagu awoodo in lagu soo bandhigo wax soo saar badan barnaamijyadeeda kala duwan ee ku saabsan deegaanka wareega.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Microsoft waxay iibsatay shirkadda SwiftKey oo ah kiiboodhka
Taasi waxay saameysaa dhinaca caqliga leh ee maskaxda, taasi waa sababta habka
Gene Munster: Nooca Apple Watch ee S ayaa imaan doona bisha Maarso
Podcast 2x19 ee Actualidad iPad: wararka xanta ah ee iPad Air 3 cusub